How'd it happen and more reports?: Hernia အူကျ-မကျ သိပါရစေ
ဒီရောဂါ လေးမျိုးအပြင် ရှားရှားပါးပါးတွေလည်း ရှိသေးတယ်။ Scrotal elephantiasis ဆင်ခြေထောက်ပိုးကြောင့် မုတ်လို ဖြစ်တာ၊ Hydrocele of testis အစေ့က မုတ်လိုဖြစ်တာ၊ Spermatocele သုတ်ပိုးအိတ်ဖြစ်တာ၊ Testicular torsion အကြောထုံးတာ၊ Testicular cancer အစေ့ ကင်ဆာ နဲ့ TB အစေ့ တီဘီတွေ ဖြစ်တယ်။ နောက် ထူးဆန်းတာတခုက Undescended testis မွေးကတည်းက အစေ့က တဖက်ဖြစ် နှစ်ဘက်လုံးဖြစ်ဖြစ် ကပ်ပဲ့အိတ်ထဲမှာ မရှိတာ။ အစေ့ တဖက်ထဲသာ စမ်းလို့ရရင် ဒါဖြစ်မယ်။ အောက်အထိမကျဘဲ ပေါင်ခြံမှာဖြစ်ဖြစ် ဗိုက်ထဲဖြစ်ဖြစ် ရှိနေမယ်။ ခွဲစိတ်ပြုပြင်ပေးရတယ်။ (စာတပုဒ် ရေးထားပါတယ်။)
(ဟာနီယာ) အူကျတာက မတ်တပ်ရပ်ရင် ကျလာမယ်။ ချောင်းဆိုး-နှာချေရင်၊ ပြေးရင်၊-ခုန်ရင်၊ အလေးအပင်မရင်၊ ဗိုက်ကို ညှစ်လိုက်ရင် ထွက်လာမယ်။ အိပ်နေရင် သူ့ဖါသာ ဖြစ်ဖြစ်၊ သွင်းပေးလို့ဖြစ်ဖြစ် ပြန်ဝင်သွားမယ်။ ၁ လ၊ ၁ နှစ်ကနေ၊ ၁ဝ နှစ်၊ အနှစ် ၂ဝ အထိ ကြာနိုင်တယ်။ ကြာကြာ ဖြစ်နေသူမှာ ယုတ်တရက် နာလာတာကတော့ အရေးပေါ်။ ပြန်မဝင်နိုင်ဘဲ ကျနေတဲ့ အူက ခေါက်နေလို့။ အူက ရောင်-နာ-ပိတ်တာ ဖြစ်လာတယ်။ Strangulated Hernia နေ့နေ့-ညည အရေးပေါ် ခွဲရလိမ့်မယ်။
ကျလာတဲ့ အူဆိုတာကို အစေ့ရဲ့ အပေါ်မှာ၊ သီးသန့် စမ်းလို့ရတယ်။ မဖြစ်တဲ့ ဘက်နဲ့ ယှဉ်ကြည့်ပါ။ ချောင်းအတု ဆိုးခိုင်းရင် ကျကျလာလို့၊ ဖေါင်းဖေါင်း လာမယ်။ လှဲအိပ်ခိုင်းတာနဲ့ ဝင်သွားမယ်။ ကျလာတဲ့နေရာက ဗိုက်အောက်ပိုင်း၊ ပေါင်ခြံအထက် နေရာက ဖြစ်တယ်။ ပြန်သွင်းပေးရင် ထွက်လာတဲ့ နေရာဆီကို သွင်းပေးရတယ်။ အတိအကျ ပြောရင် ကပ်ပဲ့အိတ် အထက် တည့်တည့်၊ ဆီးစပ်က အရိုးမာမာရဲ့ ဖြစ်တဲ့ဘက် အထက်-ဘေး ၂ လက္မလောက် နေရာပါ။ ကျနေတဲ့အူကို ပြန်သွင်းပြီး၊ မတ်တပ်ရပ် အနေအထားမှာ အဲဒီနေရာမှာ စမ်းတဲ့သူက လက်နဲ့ ဖိ-ပိတ်ထားရင် ချောင်းဆိုးခိုင်းပေမဲ့ အူက ကျမလာဘူး၊ ထွက်ပေါက်ကို ဖိ-ပိတ်ထားလို့ပါ။ ဒါဆို အူကျရောဂါ သေခြာပြီ။
ကျလာတယ်ဆိုတာ အူသပ်သပ် ကျတာတော့ မဟုတ်ဘူး။ ကြွက်သားတွေရဲ့ အတွင်းမှာ ဗိုက်တပြင်လုံးကို ဖုံးနေတဲ့ အလွှာပါးပါးလေး ရှိသေးတယ်။ အဲဒီအလွှာက ထွက်မဲ့နေရာကနေ တဖြေးဖြေးချင်း စူစူထွက်လာတာမို့ အိပ်ကလေးဖြစ်ပြီး၊ အိတ်ထဲမှာက အူသိမ်၊ အူမြှေးတွေလဲ ကပ်ပါနေမယ်။ ညာဘက်မှာဖြစ်ရင် အူအတက် ဆိုတာလည်း ပါနိုင်တယ်။
ဘာလို့ အူကျတာလဲ။ ဗိုက်ဖုံးကြွက်သား ခန္ဓာဗေဒမှာ အားနည်းနေသူ၊ ဗိုက်ကို တင်းအားဖြစ်စေမှာတွေ လုပ်တာ များလို့ကြောင့် ဖြစ်တယ်။ မဖြစ်စေချင်သူတွေ ဒါမျိုး ဆင်ခြင်ရမယ်။ အပြေး-အခုန်၊ အလေးမ၊ အတက်-အဆင်း။ ဒါ့ကြောင့် အားကစားသမား ရောဂါလို့ ထင်ရတယ်။ အမှန်က အဲလိုတော့ မဟုတ်ဘူး။ ခန္ဓာဗေဒက (ပါဖက်) ဆိုရင် မဖြစ်ပါဘူး။
(ဟာနီယာ) သေခြာရင် ခွဲရမှာပါ။ မခွဲဘဲ ယာယီ သက်သာအောင် လုပ်တာမျိုးတော့ ရှိတယ်။ အသက်ကြီးသူတွေ၊ အခွဲ မခံသင့်သေးသူတွေ ဥပမာ ဆီးချို၊ နှလုံးရောဂါရှိနေသူတွေ အတွက်သာ ညွှန်းပါတယ်။ Hernia Belt ခါးပတ်တမျိုး ပတ်ထားရတယ်။ အချိန်ရွေးပြီးခွဲနိုင်ပါတယ်။ တချို့ အသက်အတော်ကြီးမှခွဲတယ်။ သတိထားဘို့တော့ရှိတယ်။ ကြာလေလေ ကြီးလေလေဖြစ်မယ်။ အနေရခက်မယ်။ စိတ်ထဲမှာ ငါ့မှာ ဒီရောဂါရှိနေတယ်လို့ ကသိကအောင့် ခံစားနေရနိုင်တယ်။
ဒီစာကို ၁၇-၈-၂ဝ၁ဝ နေ့က ရေးပြီးတင်တော့ မေးလာတာတခုရှိတယ်။ မခွဲသေးဘဲစောင့်ချင်သူတွေ အတွက် ဆက်ဖတ်ပါ။
ကျွန်တော် အူကျနေတာ ဂ နှစ်လောက်ရှိပါပြီ။ ခုကျွန်တော် တခြားနိုင်ငံသို့ ရောက်နေပါသည်။ အရင်က အူကို တင်လို့ ရသေးတယ်။ အခု အူက မာပြီး တင်လို့မရဘူး ဖြစ်နေပါတယ်။ အရမ်းလည်း အောင့်နေပါတယ်။ ဘယ်လို သက်သာအောင် လုပ်ပေးရမည်ကို ပြောပြပေးပါ။
အခုချက်ချင်း အိပ်ယာမှာ လဲလိုက်ပါ။ အူကျတဲ့ နေရာပေါ်မှာ ရေခဲတင်ပါ။ ရေခဲကို ပလပ်စတစ်အိတ်မှာ ထည့်ပြီး တင်ပါ။ လိုသေးရင် ကုတင် ခြေရင်းပိုင်းကို မြှင့်ထားပါ။ စိတ်ရော ကိုယ်ပါ နားလိုက်ပါ။ အစာအမာ မစားနဲ့အုံး။ သွားရည်စာလဲ ဆာလွန်းမှသာ စားပါ။ ၁-၂ နာရီအတွင်း ပြန်ဝင်ရမယ်။ ကိုယ့်ဖါသာ ပြန်သွင်းကြည့်ပါ။ သွင်းတဲ့အခါမှာ ကပ်ပဲ့အိတ်ကနေ အထက်၊ နောက်၊ ဘေးဘက်ဆီ ဦးတည်ပါ။ ဝင်သွားပါလိမ့်မယ်။ ၂-၃ နာရီမှ မဝင်ရင် ဆရာဝန်ပြပါ။
ဆရာဝန်က ငြိမ်ဆေး၊ အ်ိပ်ဆေး ထိုးပေးမယ်။ သွင်းကြည့်မယ်။ အဲဒါတွေနဲ့ မရရင်တော့ အရေးပေါ်ခွဲရပါ မယ်။ နိုင်ငံခြားရောက်နေလဲ ခွဲရပါလိမ့်မယ်။
You can view the detail of product here.
Product Name : ALOE VERA (မုတ်ခါး)
Buglish Name : Moat khar
ကျွန်တော် ငယ်စဉ်က ဘီအေအေ အားကစားကွင်း (ယခု အောင်ဆန်း အာကစားကွင်း) တွင် လက်ဝှေ့နည်းပြဆရာ မစ္စတာ-ဘာဝါ သင်ကြားပြသသော (နဂါး) လက်ဝှေ့အသင်း (Naga Boxing Club) တွင် လက်ဝှေ့ပညာ သင်ကြားခဲ့ပါသည်။
ထိုစဉ်က မစ္စတာ-ဘာဝါ ကိုယ်တိုင် ကြီးကြပ်အုပ်ချုပ်ကာ သင်ကြားပေးနေချိန် ဖြစ်ပါသည်။ လေ့ကျင့်ရာ အခန်းတွင်း၌ ဝမ်းဗိုက်ကြွက်သား လေ့ကျင့်ခန်း၊ သဲအိတ်ထိုး လေ့ကျင့်ခန်း၊ Punching Ball ထိုးခြင်း၊ တစ်ဦးနှင့်တစ်ဦး လေ့ကျင့်ထိုးသတ်ခြင်း Sparing များ လေ့ကျင့်ကြရပါသည်။
ထို့အပြင် အမောခံနိုင်စေရန် (သက်လုံကောင်းစေရန်) အားကစားကွင်းကြီးအား ပတ်ပြေးရခြင်း၊ ကြိုးခုန်ခြင်းနှင့် တစ်မတ်တန်း လှေကားထစ်ထိုင်ခုံကြီးများပေါ်သို့ ပြေးတက်ပြေးဆင်းဟူသော
လေ့ကျင့်ခန်းများလည်း လေ့ကျင့်ကြရပါသည်။ သို့ကြောင့်လည်း ကျွန်တော်တို့တစ်တွေ ကျန်းမာသန်စွမ်းကြပါသည်။ အမောလည်း လုံကြရပါသည်။
သို့သော်လည်း လေ့ကျင်ခန်းများ၏ ပြင်းထန်မှုကြောင့်ဟုထင်ပါသည်။ ကျွန်တော်တို့တစ်တွေ အူကျသူ ကျကြပါသည်။ ကျွန်တော်ကိုယ်တိုင်လည်း အူကျရောဂါရပြီး မနေနိုင် မထိုင်နိုင် ဖြစ်ကာ အိပ်ရာတွင် လှဲနေရပါသည်။
အူကျရောဂါဆိုသည်မှာ ခါးက ကိုက်ခဲလာပြီး ကပ်ပယ်အိတ်အတွင်းသို့ အူချောင်းကြီး ထိုးကျနေသည်ဖြစ်ရာ မလှုပ်နိုင် မရှားနိုင် ဖြစ်နေပါသည်။ လှုပ်လိုက်လျှင် အူက ထောက်မိပြီး ကပ်ပယ်အိတ်က အလွန်နာကျင်ခြင်း ခံရပါသည်။
ရန်ကုန် ပြည်သူ့ဆေးရုံကြီးတွင် သွားရောက်ပြသသောအခါ ပထမတော့ ထိုးဆေး သောက်ဆေးများနှင့် ကုသပေးပြီး ခွဲရ စိတ်ရမည်ဟု ပြောသဖြင့် နောက်ထပ် မသွားတော့ဘဲ အိပ်ရာတွင် ခွေနေရပါသည်။
တစ်ပတ်ခန့်အကြာတွင် အမေ ဈေးကအပြန် သံပရာသီး သုံးလေးလုံး နှင့် မုတ်ခါး အနည်းငယ် ဝယ်လာပါသည်။ အမေက ကျွန်တော့်အား သံပရာသီးနှင့် မုတ်ခါးပေး၍ မုတ်ခါးကို သံပရာရည်နှင့် သွေးလိမ်းရန် ပြောပါသည်။
ကျွန်တော် ပျောက်ချင်ဇောဖြင့် ချက်ချင်းပင် သွေးလိမ်းလိုက်ပါသည်။ ဆေးလိမ်းရာတွင် ပူခြင်း စပ်ခြင်း လုံးဝမရှိပါ။ ဆေးလိမ်းပြီး အိပ်ရာထက်တွင် မှေးနေရာမှ အိပ်ပျော်သွားခဲ့ပါသည်။
ကျွန်တော် အိပ်ရာက နိုးတော့ ခါးကိုက်သက်သာသလို ရှိနေသဖြင့် ကပ်ပယ်အိတ်ကို စမ်းသပ်ကြည့်ရာ အကောင်းပကတိ ရှိနေကြောင်း တွေ့ရှိရပါသည်။ ထိုအခါမှ သံပရာသီးနှင့် မုတ်ခါးကို ယုံကြည်စိတ်ချစွာ လေးငါးရက် ဆက်လိမ်းခြင်းဖြင့် ယခုတိုင် အကောင်းပကတိ ရှိနေပါသည်။
အမေ့အား ဆေးနည်းအကြောင်း မေးကြည့်ရာ မြန်မာပရဆေးဆိုင်မှ ရရှိကြောင်း သိရပါသည်။ ကျွန်တော်ကဲ့သို့ အူကျရောဂါ ခံစားနေရသူများ ယုံကြည်စိတ်ချစွာ မုတ်ခါးနှင့် သံပရာကို အသုံးချနိုင်ကြပါစေ။
Posted by Ko Nge at Monday, March 30, 2015